FBSမှ ဆုအမှတ်များအတွက် အလဲအလှယ်အနေဖြင့် ဇိမ်ခံဆုလက်ဆောင်များ ပေးအပ်သည့် သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်ကို စတင်လိုက်ပါပြီ။
FBS သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်ဖြင့် ဆုလာဘ်ဘယ်လိုရယူမလဲ
FBS သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်သည် FBS ဖောက်သည်များအား... FBSဖောက်သည်ဖြစ်ရုံအတွက် အပိုဆုလာဘ်များရစေမည့် အထူးသီးသန့်ရွေးချယ်ခွင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်၊ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့်၊ အံ့အားသင့်စရာ လက်ဆောင်များအတွက် လဲလှယ်နိုင်မည့် အထူးဆုအမှတ်များရပါလိမ့်မည်: လက်ဆောင်များမှာ အထူးဝန်ဆောင်မှုများမှ မာစီဒီး S-Classထိဖြစ်သည်။ FBSသစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခြင်းနှင့် သင့်အရောင်းအဝယ် စွမ်းဆောင်မှုအရှိဆုံးရယူခြင်းအပေါ် လမ်းညွှန်ဒီမှာပါ။
FBS သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်သည် ရောင်းဝယ်သူများအတွက် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်နောက်ကွယ်မှ စိတ်ကူးမှာရိုးရှင်းပါသည်: အမည်စာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့်၊ အနှစ်သက်ဆုံးဖောက်သည်များ အဖွဲ့မှာ ပါဝင်ပြီး၊ သင့်သစ္စာရှိမှုအတွက် အခွင့်ထူးများရမည်ဖြစ်သည်။ သင်လုပ်ရန်လိုသည်မှာ ရောင်းဝယ်၊ ဆုအမှတ်များယူပြီး၊ သင့်သစ္စာရှိမှုအခြေအနေတွင် ရနိုင်မည့် အထူးသီးသန့်ဆုများအတွက် ယင်းတို့ကိုလဲလှယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
သစ္စာရှိမှု အခြေအနေ ၄မျိုးရှိပါသည်: Green, Silver, Gold နှင့် Platinum။ သင်သည် အလိုအလျောက် Greenတွင်စတင်ပြီး၊ အခြေအနေမှတ်များ - သင့်စုစုပေါင်းစရံငွေပမာဏပေါ်မူတည်သည့် ပမာဏရခြင်းဖြင့် အဆင့်တက်ပါသည်။ ဥပမာ သင်သည် ၃၀၀ အခြေအနေမှတ်များရသည်နှင့်တပြိုင်နက် Greenမှ Silverသို့ပြောင်းသွားပါမည်။ သစ္စာရှိမှုအခြေအနေအသစ်သို့ ရှေ့ဆက်သည်နှင့်၊ ခံစားရန် ဇိမ်ခံဆုများအသစ်တစ်စုံကို ဖွင့်လိုက်ပါပြီ။
အခြေအနေမှတ်များ၏ ပမာဏနှင့် နောက်ထပ်အခြေအနေသို့ အဆင့်မြှင့်ရန်လိုအပ်သည့် စုစုပေါင်းစရံငွေပမာဏအား သင့်သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ် ပါစင်နယ်ဧရိယာတွင် ဆန်းစစ်နိုင်ပါသည်။
FBS ပါတနာများအတွက် သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ် စည်းကမ်းချက်များသည် လုံးဝတူညီပေမယ့်၊ သူတို့သည် ဖောက်သည်များဆွဲဆောင်ခြင်းဖြင့် ဆုအမှတ်များရရန်လိုအပ်ပါသည်။ တနည်းဆိုရသော်၊ သင့်ဖောက်သည်များ အော်ဒါများပိုဖွင့်လေ၊ သင်သည် ဆုအမှတ်များပိုရလေဖြစ်သည်။
ပါတနာများအတွက် တူညီသော Green, Silver, Gold နှင့် Platinum အဆင့်များရှိပေမယ့်၊ အခြေအနေမှတ်များ၏ ပမာဏအား သင့်တိုက်ရိုက်ဖောက်သည်၏ လည်ပတ်ငွေအရ တွက်ချက်ပါလိမ့်မည်။
သင့်ဆုလာဘ်များတွင် ဆုများနှင့် အထူး VIP ဝန်ဆောင်မှုများပါဝင်သည်:
ဆုအမှတ်များကဏ္ဍတွင် သင်ရခဲ့၊ သုံးခဲ့သည့်အမှတ်များ ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတာ ပြန်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
ဘယ်လိုစာရင်းပေးသွင်းရမလဲ?၁။ သင့် FBSပါစင်နယ်ဧရိယာသို့သွားပြီး၊ အမည်စာရင်းရှိ "သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်" ကိုနှိပ်ပါ။
"သစ္စာရှိမှု အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ပါ" ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
၃။ သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့်၊ "Appleထုတ်ကုန်များစွာ" နှင့် "လပ်ကီး တီရှပ်"ပရိုမိုးရှင်းများ (ထည့်သွင်းငွေများနှင့် lotများ)ရှိ သင့်လက်ရှိတိုးတက်မှုများအား ပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်သည်။ အတည်ပြုရန်နှင့် ရှေ့ဆက်ရန် "သဘောတူသည်"ကို နှိပ်ပါ။
၄။ သင့်အီးမေးလ်နှင့် မှတ်ပုံတင်ကို အတည်ပြုပါ။
၅။ ဂုဏ်ယူပါတယ်! သင် Green အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သွားပါပြီ။
လိုအပ်သည့်အမှတ်ပမာဏရရှိပြီး၊ လက်ရှိရောင်းဝယ်နေသော ရက်များ (ရောင်းဝယ်သူများအတွက်) သို့မဟုတ် လက်ရှိဖောက်သည်များ (ပါတနာများအတွက်)၏ ပမာဏကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် ပြည့်စုံသောအခါ၊ သင်ဆန္ဒရှိသည့်ဆုကို တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိရောင်းဝယ်နေသောရက်သည် ပါဝင်ဆင်နွှဲသူမှ အနည်းဆုံးအော်ဒါတစ်ခု ပိတ်သောအခါနေ့ဖြစ်သည်; လက်ရှိဖောက်သည်သည် အပြည့်အဝအတည်ပြုပြီးသားအကောင့်ကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး၊ ပါတနာအား ကော်မရှင်ရစေမည့် အော်ဒါများပြုလုပ်သည့်ဖောက်သည်ဖြစ်သည်။
သင့်ဆုရရန်၊ ဆုများကဏ္ဍသို့သွားပြီး၊ သင့်သစ္စာရှိမှု အခြေအနေတွင် ရရှိနိုင်မည့်ဆုစာရင်းအား ကြည့်ရန် "သင့်ဆုများ ရယူပါ" ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ ဆုလက်ဆောင်တစ်ခုစီအတွက် အမှတ်များနှင့် လက်ရှိရောင်းဝယ်နေသော ရက်များ/ လက်ရှိဖောက်သည်များဘယ်လောက်လိုသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။
ဆုကိုရွေးပါ၊ သင်သုံးချင်သည့် အမှတ်ပမာဏကို ရိုက်ထည့်ပါ၊ အကောင့်ကိုသတ်မှတ်ပြီး၊ "ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါ"ကို နှိပ်ပါ။
ဆုလက်ဆောင်ရရန် ဖောင်ဖြည့်ပါ။ ဆုအော်ဒါမှာလိုပါက၊ သင့်ကို ဆက်သွယ်ရမည့်အချက်အလက်များနှင့် ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရမည့်အသေးစိတ်ကို သတ်မှတ်ရန်လိုပါမည်; ဝန်ဆောင်မှုလက်ခံရရှိရန်၊ သတ်မှတ်ထားသောဝန်ဆောင်မှုအတွက် လိုအပ်သောအချက်အလက်ထည့်ပါ။
သင့်အော်ဒါများ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုကြည့်ရန် သင့် အော်ဒါမှတ်တမ်းကို ဆန်းစစ်ပါ: အော်ဒါနံပါတ်၊ ခြေရာခံနံပါတ် (ရှိပါက)နှင့် သူတို့၏လက်ရှိအခြေအနေ။
သင့်ဆုအမှတ်ရမှတ်များ အရှိန်မြှင့်လိုပါက၊ FBSမှာ ပါဝင်ရန်သင့်မိတ်ဆွေများကို ဖိတ်ပါ၊ ဆုအမှတ် ၁မှတ်ရယူပါ။
မိတ်ဆွေဖိတ်ကြားရန်၊ ဆုများကဏ္ဍရှိ လင့်ခ်ကိုနှိပ်ပါ။
သင်ကူးယူရန် (သို့) Facebookမှတဆင့် မိတ်ဆွေများနှင့်မျှဝေရန်လိုမည့် ထူးခြားသည့်လွှဲပြောင်းလင့်ခ်အား ပေးပါလိမ့်မည်။
သင်ဖိတ်ကြားလိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်သည် FBSတွင်အကောင့်မှတ်ပုံတင်ရန် ဤလင့်ခ်အား လိုက်နာရမည်။ သင့်မိတ်ဆွေမှ ပါစင်နယ်ဧရိယာကို အတည်ပြုပြီး၊ lot ၂ခုရောင်းဝယ်ခဲ့ပါ၊ ဆုအမှတ် ၁မှတ်အား သင်တို့နှစ်ဦးစလုံးထံ ပေါင်းထည့်ပေးလိမ့်မည်။ သင်ဖိတ်ချင်သလောက် မိတ်ဆွေများများ ဖိတ်နိုင်ပါသည်။
သီးသန့် အခွင့်ထူးများခုချက်ချင်း စတင်ခံစားပါ!
FBS သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်သည် စိတ်ချရတဲ့အကျိုးဆောင်နှင့် အလုပ်လုပ်ခြင်းအတွက် ဇိမ်ခံဆုလက်ဆောင်များရယူရန် ထူးခြားသည့်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခမဲ့ပါဝင်လိုက်ပါ!